Toetr’andro: miditra amin’ny manasara-taona | NewsMada
Toetr’andro: miditra amin’ny manasara-taona
Malefaka sy maina ny tsioka avy any atsimo atsinanana na ny Alizay eto Madagasikara amin’izao fotoana izaofa somary hahazo hery izany amin’ny fiafaran’ny herinandro.
Miditra amin’ny volon’andro manasara-taona ny toetry andro eto Madagasikara raha ny filazan’ny mpamantatra ny toetry ny andro etsy Ampandrianomby.
Amin’ity herinandro ity, hisitraka orana tandrifin-drahona mahalana ny ilany Atsimo-Atsinanan’ny Nosy ary hiitatra tsikelikely manaraka ny morontsirak’i Vatovavy Fitovinany sy Atsinanana izany amin’ny faran’ny herinandro.
Hahalana, tahaka izany, koa ny orana tandrifin-drahona amin’ny atitanin’ny faritra Bongolava, Itasy, i Vakinakaratra, Analamanga, Amoron’i Mania, i Melaky vokatry ny hafanana mandritra ny tontolo andro. Ho maina ny andro amin’ny faritra hafa rehetra.
Tsy misy loatra ny tarehimarika misongadina raha mahakasika ny maripana ambany. Amin’ny fiafaran’ny herinandro kosa vao ahitana fidinana kely ny maripana ambony ho an’ny afovoan-tany sy any Atsinanana. Manodidina ny 8 hatramin’ny 22°C ny ambany ary eo anelanelan’ny 21 hatramin’ny 34°C ny ambony.